अनुहार र घाँटी छाला सौन्दर्य को मालिश
हाल धेरै मानिसहरू को पर्यावरण जीवित अवस्था एक उच्च पर्याप्त स्तर छैन। यो, सम्पूर्ण मानव शरीर मा नकारात्मक प्रभाव छाला र सहित छ। अनुहार - बैठक गर्दा अन्य हेर्न भनेर कार्ड: यो व्यक्ति को उमेर, सामाजिक स्थिति र चरित्र निर्धारण गरिन्छ। दुर्भाग्यवश, यी अवस्थामा आफ्नो वर्ष भन्दा पुरानो देखिन्छ एक तरुण उपस्थिति भएको भन्दा धेरै सजिलो छ। यसैले अनुहार र घाँटी, जो, हामी थाह छ, यी क्षेत्रमा अपेक्षाकृत प्रारम्भिक झुर्रियाँ ढाकिएको छन् विशेष गरी महिला, को छाला लागि थप समय मायालु खर्च गर्न आवश्यक छ। एक छाला बलियो बनाउन प्रभावकारी तरिका - अनुहार र घाँटी मालिश। यो उनको घर लिन एक एकदम सरल प्रक्रिया हो।
किन आवश्यकता अनुहार र घाँटी?
सुधारिएको: यो प्रक्रिया rejuvenate एउटा तरिका रूपमा देख्न सकिन्छ , छाला हालत आफ्नो जहाजहरु अझ बलियो हानिकारक बाह्य कारक लोच र प्रतिरोध वृद्धि। यो पनि बढाउने मद्दत गर्छ छाला पुनर्जनन यसको उपस्थिति गर्न लाभदायी छ जो सेलुलर स्तर, मा। अनुहार र घाँटी मालिश, नियमित गरेको छ भने, सक्षम लागि3महिना, छाला को राज्य पुनर्स्थापना एक स्वस्थ नजर दिन छ। यो आराम गर्न मद्दत गर्छ किनभने, सुत्न जानुअघि यो प्रक्रिया गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
अनुहार र घाँटी को लसीका जल मालिश
यो मालिश को प्रकार सुनिंनु कम र microcirculation सुधार गर्छ। उहाँलाई धन्यवाद, आँखा अन्तर्गत गाढा सर्कल हटाउनु, छाला कक्षहरू अपडेट, र यो एक स्वस्थ उपस्थिति लाग्छ। अनुहार झुर्रियाँ पहिलो देखा छ भने, त्यसपछि यो प्रक्रिया आफ्नो नाली सुस्त गर्न सक्षम छ। यो एक cosmetologist को मद्दत बिना स्वतन्त्र गर्न सकिन्छ।
अनुहार मा लागू र घाँटी क्रीम छाला लोच सुधार गर्छ।
को Palms सफा र न्यानो राख्नुपर्छ।
किनाराको गर्न केन्द्र देखि दिशा मा निधारमा मार्फत ढिलो र नरम, भाँचिएको को pressings हात।
को चिउँडो देखि cheekbones को शीर्ष गर्न, गाला गर्न नाक को मन्दिर गर्न pits देखि nasolabial को पुल बाट: त्यसपछि निर्देशन मा गति को नै प्रकृति गर्छन्।
दिशा राखन, ज्योति पेट मा आन्दोलनहरु को प्रकार परिवर्तन गर्नुहोस्।
घाँटी मालिश पर्छ यसैगरी छाती टाढा एक दिशा मा।
massaging प्रत्येक प्रकार छाला सुत्छन् छैन हेरचाह, 5-7 मिनेट समर्पित।
अनुहार र घाँटी को आराम आत्म-मालिश
तपाईं अनुहार stroking प्रकाश सुरु गर्नुपर्छ, र त्यसपछि थप बलियो चलखेललाई अगाडि बढ्नुहोस्।
सूचकांक, दुवै हात को मध्य र घन्टी औंलाहरु प्रकाश बनाउन परिपत्र आन्दोलनहरु को मन्दिर (3 पटक) गर्न निधारमा को केन्द्र देखि। त्यसपछि, त्यसैगरि मालिश अप र तल निधारमा को केन्द्र देखि।
तपाईंको निधारमा को केन्द्र गर्न मन्दिर देखि र त्यसपछि hairline देखि र eyebrows मा मालिश सुरु गरेर निर्देशन परिवर्तन गर्नुहोस्।
प्रकाश अस्तव्यस्त थप्पड को निधारमा गर्नुहोस्।
आफ्नो सूचकांक र दुवै ब्रो बिन्दु मा हात को मध्य औंलाहरु ध्यान। प्रकाश अर्द्ध-गोलाकार आन्दोलनहरु माथिको र भाग नजिकै मालिश।
पुल मा दुवै हात को तीन मध्य औंलाहरु राख्न र मन्दिर गर्न माथिल्लो cheekbones संग अहम आन्दोलनहरु प्रविष्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि नाक गर्न, विपरीत गर्न निर्देशन परिवर्तन।
प्रत्येक अन्य विरुद्ध Palms RUB र गाल मालिश PAT।
को चिउँडो मा दुवै हात को तीन मध्य औंलाहरु ध्यान र तल्लो चिबुक साथ तिनीहरूलाई नेतृत्व। दिशा परिवर्तन।
को लागि खोल्दै घाँटी मालिश, स्ट्रोक यसलाई अघि सुरु। यो आन्दोलनहरु को छाती गरेको भनेर सम्झना गर्नुपर्छ।
हात को फिर्ता दुवै हात तिनीहरूलाई जमीन देखि नेतृत्व।
त्यसपछि, जबकि एक परिपत्र अनुदैर्ध्य आन्दोलन मा परिवर्तन को दिशा कायम राखेर।
यसरी, अनुहार र घाँटी मालिश मात्र स्वास्थ्य को लागि धेरै राम्रो, तर पनि आत्म-होल्डिंग लागि सजिलै पहुँच योग्य छ। यसलाई यी प्रक्रियाहरु छाला ताजगी को प्रभाव कायम गर्न धेरै पटक एक हप्ताको पूरा गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
मानव शरीर को विकासवादी पूर्णता को एक चिन्ह रूपमा खुट्टा को संरचना।
कसरी खाने पछि उल्टी induce गर्न?
Bazhov, "नीलो साँप": एक सारांश। "नीलो साँप": मुख्य वर्ण, छोटो retelling
Absinthe संग ककटेल। घर मा जादू।
युक्रेन को वायु सेना: विवरण। युक्रेनी वायु सेना को संख्या